फुटबलर ओजिलको जर्सी किन पुर्याइयाे सगरमाथा बेसक्याम्प ?
नेपाली पब्लिक बुधबार, जेठ १, २०७६ १३:०३
काठमाडौँ – वसन्त ऋतुको उत्तरार्धमा यतिबेला आरोहीहरू विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढ्ने प्रयास गर्दैछन्। पूरा विश्व त्यहाँ बन्ने कीर्तिमानको प्रतीक्षामा छ। सगरमाथा क्षेत्रमा कोही शिखर आरोहण गर्न भेला भएका छन् भने कोही पदयात्रा मात्रै गरेर भए पनि चित्त बुझाउँछन्।
यसै क्रममा इङ्लिश फुटबल क्लब आर्सनलका एक नेपाली प्रशंसक पनि सगरमाथा आधार शिविर पुगेका छन्। उनी त्यहाँ पुगेको सूचना आर्सनलका विश्वचर्चित जर्मन खेलाडी मेसुट ओजिलले सामाजिक सञ्जालमार्फत् दिएका हुन्।
काठमाडाैँका निरोज खतिवडा आक्रामक मिडफिल्डर ओजिलले आफ्नो हस्ताक्षरसहित पठाएको जर्सी लिएर सगरमाथा आधार शिविर गएका हुन्। ओजिलले सोमबार ट्विटरमा उनले लगाउने १० नम्बर भएको जर्सी बोकेका खतिवडाको र आर्सनलका नेपाली प्रशंसकहरूको सामूहिक तस्बिर पोस्ट गरेका थिए।
ओजिलले लेखेका छन्, ‘हेर्नूस्, मैले हस्ताक्षर गरेर नेपालको आर्सनल फ्यान क्लबलाई टीसर्ट पठाएपछि के भयो! एक जनाले त्यसलाई सगरमाथा आधार शिविरसम्मै पुर्‍याए।’
ओजिलले ती तस्बिर पोस्ट गरिदिएपछि २८ वर्षीय खतिवडा आश्चर्यचकित भए। उनले ट्विटरमै ओजिललाई धन्यवाद दिँदै ‘आफूले त्यसलाई शब्दमा व्याख्या गर्न नसकिरहेको’ लेखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विषयमा स्नातकोत्तर गर्दै गरेका खतिवडा आफू विगत १० वर्षदेखि ओजिलको ‘फ्यान’ र १५ वर्षदेखि आर्सनलको समर्थक रहेको बताउँछन्। उनी आर्सनल फ्यान क्लबका उपाध्यक्ष पनि हुन्। उनले भने, ‘ओजिलले मेरो फोटो पोस्ट गरिदिएपछि म त एक छिन हेरेको हेर्‍यै भएँ।’ उनी वैशाख १७ गते आधार शिविर पुगेका हुन्।
के भन्छन् अरू प्रशंसक?
ओजिलले गरेको ट्वीट २३ सय भन्दा बढी रिट्वीट भएको छ तथा त्यसले १८ हजारभन्दा बढी लाइक पाएको छ। उनका फ्यानहरू कसैले ‘ओजिलको स्थान सगरमाथाको शिखरमा रहेको’ त कसैले यसले आर्सनल परिवारको ‘वास्तविक मूल्य देखिएको’ भन्दै प्रतिक्रिया लेखेका छन्।
कसैले भने उनलाई युरोपा कपको फाइनलपछि नेपाल आउन निम्तो दिएका छन्। नवीन चित्रकारले लेखेका छन्, ‘हामी तपाईंलाई बेसक्याम्प नै लैजाउँला।’
बाइस वर्षको उमेरमै पहिलो पटक विश्वकप खेल्दा ओजिललाई विश्वले सन् २०१० मा चिनेको थियो। सन् २०१४ मा जर्मनीले विश्वकप जित्दा उनको योगदान महत्त्वपूर्ण मानिएको थियो। जर्मन खेलाडी ओजिलले अहिलेसम्म पाँच पटक ‘जर्मन प्लेयर अफ दि इयर’ को उपाधि पाएका छन्। उनी सन् २०१३ देखि आर्सनलबाट क्लब खेल्न थालेका हुन्। त्यसअघि उनी स्पेनको रियल मड्रिडबाट खेल्थे।(बीबीसी)
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १, २०७६ १३:०३